Nandritra ny fiaraha-mivavaka Firaisampinoana tao amin'ny Lasapely Katolika Saint Luc Famindrampo an'Andriamanitra Befelatanana ny alakamisy 21 janoary 2021, dia nitambotsitra i mopera Rabenarivo Rolland, S.J. Aumonier n'ny hopitaly HJRA.
Nanao ny vavaka Firaisampinoana izy, ary anjarany ny nanao Ranombavaka, izay tokony ho fohy, fa somary lava ihany ny vavaka nataony, ary dia nofaranany tamin'ny vavaka fifonana, ary ny teniny farany dia hoe "TOMPO O" dia nitambotsitra izy ary niala ny ainy.
52 taona izy izao nandao ny tany izao, 28 taona naha Relijiozy azy, ary 18 taona naha pretra azy tao amin'ny Fikambanan'i Jesoa (Jesuite). Anisan'ny toerana niasany tany amin'ny Diosezin'i Tsiroanimandidy.
Ny razana dia ao amin'ny lasapely Md Josefa Analamahitsy Bourbon, ary atao veloma farany ao amin'ny tokotany Centre d'Animation Spirituelle St Joseph anio sabotsy 23 janoary amin'ny 1ora atoandro, alohan'ny hanaterana azy eny amin'ny fasan'ny misiona Ambohipanja.